cameras – Page2– DigitalTimes
ကျောဘက်ကင်မရာ၃လုံးပါလာမယ့် Huawei P20 နဲ့ P20 Plus
မတ်လ ၂၇ရက်နေ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့မှာကျင်းပမယ့် Huawei P20 ဟန်းဆက်၃လုံး မိတ်ဆက်ပွဲအတွက် Huawei ကနေ မီဒီယာတွေဆီကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်။ မော်ဒယ်လ်သုံးမျိုးထဲက ၂မျိုးကတော့ Huawei P20 နဲ့ P20…
Dual-camera ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ???
အခုဆို ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းတွေမှာ dual-camera တွေကို အပြိုင်အဆိုင် ထည့်လာကြတာတွေ့လာရပါတယ်။ ဒီတော့ dual-camera နဲ့ပတ်သတ်သမျှလေးတွေကို ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ရအောင်။ ဒါဆို Dual-camera ဆိုတာဘာလဲ?? Dual-camera ဆိုတာကတော့…
Real-time HDR ပုံတွေမှာ အားသာလာတဲ့ Galaxy A8 နဲ့ A8+(2018)
Samsung Galaxy A8 (2018) နဲ့ A8+(2018) တွေက mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ user တွေကို တော်တော်စွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့ ဟန်းဆက်တွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ feature…
Audio & Video cameras Drone FEATURES gadgets Games Life Style Mobile & Tablets Smartwatches Softwares & Application TV & Smart Home Device VR
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လတ်စ်ဗီးဂတ်စ်မှာ Consumer Electronics Show ကို နှစ်စဉ် ကျင်းပခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ပါပြီ။ ဒီနှစ်မှာလည်း ယခုလ ၉ ရက်နေ့ကနေ…
cameras FEATURES Softwares & Application
စမတ်ဖုန်း ကင်မရာကို ဘာသာပြန်ဖို့ အသုံးပြုနည်း
စမတ်ဖုန်းများဟာ စွမ်းရည်မြင့်မားလာကြပြီး အိတ်ဆောင် ကွန်ပြူငယ်လေးများဖြစ်လာကြပါပြီ။ သူ့မှာ ပါတဲ့ ကင်မရာများကိုလည်း ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးဖို့အတွက်သာ အသုံးပြုလို့ရတာ မဟုတ်ဘဲ အခြား အလုပ်များအတွက်ပါ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ဒီ…
စမတ်ဖုန်းကနေ ကောင်းမွန်တဲ့ Bokeh Effect များ ရိုက်ကူးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၃) ခု
စမတ်ဖုန်းများမှာ ဓါတ်ပုံနောက်ခံကို မှုန်ဝါးစေတဲ့ Bokeh Effect ကို ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ နည်းပညာများကို ထည့်သွင်းလာကြပါတယ်။ သူက ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းဖြင့် ဓါတ်ပုံရဲ့ Foreground နဲ့ Background…
Android Apple cameras FEATURES Google HTC HUBS Mobile & Tablets OnePlus Oppo Samsung Vivo Xiaomi
Selfie ဓါတ်ပုံ ရေစီးကြောင်းကြောင့် အရှေ့ ကင်မရာ ကောင်းတဲ့ စမတ်ဖုန်းများကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလာကြပါတယ်။ အဲဒီ လူများအတွက် ယခုနှစ်ထုတ် Selfie Camera အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။…
Apple cameras Google Huawei Samsung
လှုပ်ရှားနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးရာမှာ iPhone X, Pixel2တို့ထက်သာသွားတဲ့ Galaxy Note 8
ကင်မရာတွေသုံးတဲ့နေရာမှာ စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေကိုတော်တော်ကြီးသုံးလာကြပြီး ပြီးခဲ့တဲတစ်ပတ်ကစစ်တမ်းအရဆိုရင် iPhone ကိုသုံးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဖုန်းတိုင်းရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်အလုံးတိုင်းကတော့ iOS နေနေ Android နေနေ ပိုကောင်းတဲ့ ကင်မရာ feature တွေကိုသုံးကြတာပဲဖြစ်လို့ ဓာတ်ပုံတွေ…
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ထင်ပေါ်လာမယ့် Tech Trends များ
ဒီဇိုင်းနဲ့ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်း Frog က လာမယ့်နှစ်မှာ ထင်ပေါ်လာမယ့် Tech Trends များကို ဟောကိန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ယခင်နှစ်ကလည်း သူရဲ့ ဟောကိန်းများဟာ တိကျမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။…
Android Audio & Video cameras FEATURES Games HUBS Life Style Mobile & Tablets Softwares & Application
၂၀၁၇ ခုနှစ်ထုတ် ဖုန်းများထက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထုတ် ဖုန်းများက အားသာလာမယ့် အချက် (၉) ချက်
ပိုမို မြန်ဆန်၊ စမတ်ကျပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စမတ်ဖုန်းများဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ပေါ်ထွက်လာတော့မှာပါ။ ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံး မိုဘိုင်း ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်သူ Qualcomm က နောက်ဆုံးထုတ်…
Android Apple cameras FEATURES Google HTC Huawei HUBS LG Mobile & Tablets Motorola Nokia Samsung Sony Xiaomi
၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ ကင်မရာ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းများ
ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးရတာ ဝါသနာပါတဲ့ လူများဟာ အကောင်းစား ကင်မရာများ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းများကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလာကြပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာလည်း ကင်မရာကောင်းများပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းများစွာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Review မှာတော့…
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုအများဆုံးကင်မရာစာရင်းမှာ iPhone က ထိပ်ဆုံးရောက်နေ
စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ built-in ကင်မရာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း standalone ကင်မရာတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးကို မယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆို ဖုန်းကင်မရာကိုသုံးလာတာက အများဆုံးဖြစ်လာပါပြီ။ ဓာတ်ပုံ share လုပ်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Flickr…
Apple cameras FEATURES HUBS Mobile & Tablets
iPhone X ရဲ့ ကင်မရာကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနည်းများ
အခုဆိုရင် iPhone X ဟာပြည်တွင်း ဖုန်းဆိုင်တချို့နဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ စတင်ရောင်းချ ပေးနေပါပြီ။ Apple ရဲ့ ၁၀နှစ်ပြည့်အဖြစ် ထုတ်တဲ့ဖုန်းဖြစ်တာကြောင့် အခြားဖုန်းတွေနဲ့ ကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်ချက် ကောင်းတွေအများ စုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။…
iPhone7ပိုင်ရှင်များ iPhone 8 မဝယ်ယူသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဒီနေ့ခေတ်မှာ iPhone ဝယ်ဖို့ အတွက် ရွေးချယ်စရာများစွာ ရှိပါတယ်။ ၃၅၀ ဒေါ်လာတန် iPhone SE ကနေ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန် iPhone X…